China Chlorine Dioxide Air Sanitizer fanamboarana sy orinasa | FIZA
Fangaro fototra sy ny habetsaky ny atiny: ClO2 (6g)
Endrika fatra: Gel
Daty farany: 1-2 volana aorian'ny nisokatra.
Ny sanitereran'ny diôzôma klôroina dia mpanadio rivotra sy mpamelombelona rivotra mahomby. Izy io dia afaka manala oksizenina haingana ireo zavamiaina bitika rehefa mifandray amin'izy ireo, ary amin'izany dia mamono ny bakteria na manakana ny fitomboany.
Mahomby sy mahomby:
Ny fitsapana natomboky ny fikambanana matihanina dia mampiseho fa ny tahan'ny famonoana otrikaretina ny gel manadio ny rivotra dia mahatratra 99,9%.
Haingana sy maharitra:
Ny vokatra dia afaka mandefa ny vokatra famonoana mikraoba haingana ary azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra.
Milamina sy miely patrana
Ny vokatra dia tsy karsinogenika, teratogenika, na mutagenic ho an'ny olombelona. Ny fiarovana azy dia sokajy A1 avy amin'ny World Health Organization.
Ny habetsaky ny atiny: 158g (gel 150g, activator kitapo 8g)
Tontolo iainana azo ampiharina:
Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny tavoahangy gel fanadiovan-drivotra 150g dia afaka manadio toerana mandritra ny 15-25 m2. Azo ampiasaina amin'ny toeram-piasana, paroasy, trano, efitrano fianarana, ao anaty fiara ... sns. Azo ampiasaina hamono otrikaretina koa izy io.
1. Vohay ny satroka voatomboka amin'ny tavoahangy
2. Araraka ao anaty tavoahangy ireo mpikatroka kitapo rehetra
3. Ovay ilay satroka amin'ilay misy loaka misy rivotra, mijanona 15mins.
4. Hamarino tsara fa mihombo ho lasa colloid ny atiny, raha vao mihamafy izy, apetraho ambony ao anaty efitrano. Mba hanitsiana ny tahan'ny famoahana ny atiny mavitrika, amboary ny haben'ny lavaka rivotra amin'ny satrony
Azafady aza atsofohy ny tavoahangy na apetraho ambony ambany izy rehefa nosokafana.
Aza apetraka eo ankoatry ny fidiran'ny rivotra eo am-baravarankely. Aza miala amin'ny tara-masoandro mivantana.
Aza mba mitsoka mivantana amin'ny fisokafan'ny tavoahangy.
Aza hadino ny mifampikasoka amin'ny akanjo na lamba.
Raha sendra voatelina tsy nahy dia manatona dokotera avy hatrany.
Ny tontolo fitahirizana dia tokony ho maina, mangatsiatsiaka ary misy rivotra madio, lavitra ny hafanana sy ny afo.
Previous: Chlorine Dioxide Gel Powder
Manaraka: Air Deodorizer
Karatra Chlorine Dioxide
Vahaolana Chlorine Dioxide